दुई महिनाको छोरालाई कलेजो दिएर बचाउने महेश ‘छोरालाई जीवन दिएँ, अब भविश्य दिनुछ’ « Online Tv Nepal
विवाह गरेको चार वर्षसम्म महेशप्रसाद र गीता अवस्थीले सन्तान जन्माएनन् । यसबीचमा समाज र आफन्तहरु उनीहरुलाई प्रश्न गर्थे– बच्चा कहिले ?
अस्पतालले शिवान्सलाई कहिले एनआईसीयू त कहिले आईसीयूमा राख्थ्यो । आमालाई दुध निचोरेर ल्याउन भनिएको थियो । विहान भयो कि गीता सीसीमा दुध बोकेर कक्षबाहिर कुर्थिन् । उनको दुध फ्रिजमा राखेर नर्सले दैनिक पाँच एमएल पिलाइदिन्थे । तर शिशुको हालत झन् खराब भइसकेको थियो । अब पेट मात्र होइन, पुरै शरीर फुलेको थियो ।
यसरी २० दिन कटाएपछि महेशको डाक्टरप्रति भरोसा डग्मगायो । उनले डाक्टरलाई भने, ‘तपाईहरु सक्नुहुन्न भने भन्नुस् । हामी अर्कै अस्पताल लैजान्छौं ।’ डाक्टरले जवाफ दिए, ‘कोशिस गरिरहेका छौं । के भएको हो ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनौं ।’
महेश कलेजोको राम्रो उपचार हुने अस्पतालहरु खोज्न थाले । भेट्टाए चेन्नइ,, भारतको ‘डाक्टर रेला इन्स्टिच्युट एण्ड मेडिकल सेण्टर ।’ कलेजो रोगको उपचारका लागि राम्रो अस्पताल भएको थाहा पाएपछि केही डाक्टरहरुसँग खर्चवारे छलफल गरे । चालिस लाखभन्दा बढी लाग्नसक्ने कुरा आयो । तर उनको खाता रित्तिइसकेको थियो । आफन्तबाट पैसा जुटाउन लागे ।
चन्नई पुगेको पाँचौ दिनमा डाक्टरले खबर दिए- बच्चाको कलेजो प्रत्यारोपणको विकल्प छैन । भन्दै थिए, ‘बच्चा सानो भएकाले अरुले कलेजो दिएर हुँदैन । बाबा या आमाबाटै लिनुपर्छ ।
तर पाँचौ दिनमा डाक्टरले अर्को नयाँ खबर लिएर आए– बच्चाको कलेजो प्रत्यारोपणको विकल्प छैन । डाक्टर भन्दै थिए, ‘बच्चा सानो भएकाले अरुले कलेजो दिएर हुँदैन । बाबा या आमाबाटै लिनुपर्छ । त्यसका लागि मेडिकल्ली फिट हुनुपर्छ ।
महेश छोरालाई स्पर्श गर्न चाहन्थे । सोध्न चाहन्थे, ‘बाबु, मेरो कलेजोले काम गरिरहेको छ नि !’ तर, शिवान्सको शिरदेखि पाउसम्म तार र पाइप जडान गरिएको थियो । आँखामा पट्टी बाँधिएको थियो । स्लाइन दिएको थियो । घाँटीदेखि पेटसम्म प्वाल पारिएको थियो । दुई महिनाको शिशुलाई कस्तो सास्ती ? यो देखेर महेशलाई भने मुटु मै प्वाल परेजस्तो भयो ।
१४ दिनपछि शिवान्सलाई भेन्टिलेटरबाट निकालियो । अझै पनि महेश–गीतालाई लाग्थ्यो, ‘खै निको होला र ?’ डाक्टरको सान्त्वनाले आत्मबलको पारो अलिकति बढाउँथ्यो । उनीहरुले भन्थे, ‘बच्चाको स्वास्थ्यमा निकै सुधार आइरहेको छ ।’ सम्बन्धित डाक्टरले हरेक दिन परामर्श दिन्थे । बच्चाको अवस्थाबारे स्पष्ट पारिदिन्थे । यसैले महेश–गीतालाई सम्हालिन सहयोग पुग्थ्यो ।
आफैंले कल्पना गर्न नसक्ने जंघार तरेर यहाँसम्म आइपुगेका छन् महेश । मनभित्र कालो बादल मडारिएको छ । अन्तिममा बोल्छन्, ‘जतिसुकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि मनभित्र आशाको दियो निभ्दो रहेनछ । जिन्दगी मजाक होइन रहेछ ।’ ( साभारः अनलाइन खबर)